ယုန်လေး – အိမ်မပိုင်ရင် ဂေါ်လီမလုပ်နဲ့| Myanmar Mp3 Album
Home / 2010 / September / 09 / ယုန်လေး – အိမ်မပိုင်ရင် ဂေါ်လီမလုပ်နဲ့ 
ယုန်လေး – အိမ်မပိုင်ရင် ဂေါ်လီမလုပ်နဲ့ 
(1)ကလိုက် feat နွေးနွေး
(4)ဆုတောင်းတွေပြည့်ချင်တယ် feat နီနီခင်ဇော်
(5)တောသားလေးတစ်ယောက်မြို့ကိုရောက်နေ feat သိန်းလင်းစိုး & ဒီယံ
(6)မင်းကြောင့် feat ဒီယံ
(7)ဘယ်လိုလဲ feat Snare & စောညီ
(10)ဟေ့ဘေဘီ feat ကျော်ထွဋ်ဆွေ&ဂျောက်ဂျက်
(11)မရှိသင့်တဲ့လောင်းကစား feat နေဝင်း&nine one
(12)ငယ်ငယ်ထဲကချစ်သူ feat နီနီခင်ဇော်
Song Track credit to “Pyae Phyo” in comment.
September 9, 2010 ချစ်သားငယ်လေး ယုန်လေး New Myanmar Albums 20 Comments
20 thoughts on “ယုန်လေး – အိမ်မပိုင်ရင် ဂေါ်လီမလုပ်နဲ့ ”
Ifile နဲ့တင်ပေးပါလား ဗျာ
Media Fire က ဒေါင်းနေတယ်
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Ifile နဲ့ပြန်တင်ပေးပါလား။
ပုံက ဒီထက်ကြီးတဲ့ဆိုဒ် တင်ပေးပါလား။ အခုဟာက သီချင်းနမယ်တွေ ဘာမှမမြင်ရလို့။
Thet Paing Htut
ဒေါင်းလို့ မရပါဘူး ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ပြန်တင်ပေးပါလားဗျာ
သူငယ်ချင်း – ညာဏ်လင်းအောင် ဆိုတာပါ။ ဒါပေမယ့် Version က ၄မျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဘယ်သူတွေဆိုတာလဲမသိဝူး ? Download Link လေးကို Share ပေးစေချင်ပါတယ်။ Version ၄ မျိုးလုံးပေါ့။ နောက်ပီး အဆိုတော်နာမည်တွေလဲသိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါသူငယ်ချင်းတို့ ။
@ Chit Khin
(4)ဆုတောင်းတွေပြည့်ချင်တယ် feat နီနီခင်ဇော်
(6)မင်းကြောင့် feat ဒီယံ
(11)မရှိသင့်တဲ့လောင်းကစား feat နေဝင်း&nine one
အာဇာနည်ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီးတွေ ရချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ကျန်တဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော်သီချင်းတွေ တွေ့ရပေမယ့် ကိုအာဇာနည်တေးသီချင်းတွေ ဒီမှာ မတွေ့ရတာ ဘာကြောင့်လည်းမသိဘူး
(တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့နော် မသိလို့ စပ်စုကြည့်တာပါ)
I cannot download file, Plz upload again , thanksalot
paw ta htet paw lar tae yone lay …
yone lay ka wa tote g
weight shaut lite own
. .party mhar ph no pay kae tal lay
set mal pyaw pee bal yauk twar tar tone
ကိုယုန်လေး..ကျွန်တော်ကိုသီချင်းတစ်ပုဒ်လောက်စပ်ပေးပါလား……… .ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်နေမိတယ်ဆိုတဲ.ကောင်လေးတစ်ယောက်ခံစားနေရတဲ့ ကြောင်းကိုကောင်မလေးသိစေချင်တယ်ဆ်ုတဲ. သီချင်းမျိုးဆိုပေးပါဘူး
ဟိုးအရင်တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့အခွေပါ Synergy အဖွဲ.ရဲ့ သော့ငါးချောင်းဧ။်တံခါးပေါက် ဆိုတဲ့ Album ကိုလိုချင်တာ ဘယ်မှာမှရှာမရဘူးဖြစ်နေတယ် ရှာပေးလို.ရနိုင်ပါမလား ကူညီပါဦး
download လုပ်လို့မရ ဘူး ။
သူ့သံစဉ်တွေကကောင်းလို့copy lout yin kg ma lar lo par
” စိတ်ကူးမယဉ်တတ်တဲ့ငါ…. အမြဲတမ်းငါလက်တွေ့မှာ…မင်းနဲ့တွေ့တော့မှ ငါ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာ.. ဘာလုပ်လုပ်စိတ်တို့မပါ..နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဖို့ငါ..တမင်တကာဖန်တီးပြီး တိုက်ဆိုင်သလိုပဲပေါ့… ငါကြက်သီးတွေထနေပြီ..လေထဲငါမြောက်မြောက်သွားတာမင်းလေးတွေ့တိုင်း… ဒီလို၂ယောက်တည်း ကိုယ့်ဘေးနေပြီး
အသက်တို့ဆက်ချင်သူ… အခွင့်ရေးတွေပေးနေပြီ…. ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တော့မှ ငါဘေးရောက်သွားမလား.. ဒီလိုကမ္ဘာပျက်သွားမလား ကြောက်ရွံ့လို့နေသူ……..မမုန်းလိုက်နဲ့နော်….ငါစိတ်တွေထိန်းလိုက်ပြီ…သူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့ တစ်သက်လုံးရှိနေမယ်…….. ခန့်မှန်းရခက်သူ ငါအမြဲမျှော်လင့်ရသူ စိတ်ကူးထဲပဲကျေနပ်မှုပေးနေမယ်…….
ငါကြက်သီးတွေထနေပြီ..လေထဲငါမြောက်မြောက်သွားတာမင်းလေးတွေ့တိုင်း… ဒီလို၂ယောက်တည်း ကိုယ့်ဘေးနေပြီး
အသက်တို့ဆက်ချင်သူ… အခွင့်ရေးတွေပေးနေပြီ…. ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တော့မှ ငါဘေးရောက်သွားမလား.. ”
တေးရေး/ဆို – ယုန်လေး (အမုန်း၌စတင်ခဲ့သောအချစ် ကချင်ဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ဇာတ်ဝင်တေး)
သီချင်းအစအဆုံးရှိရင် MMA မှာတင်ပေးပါ သူငယ်ချင်းတို့…………